Ungayithuthukisa Kanjani Intengo Yokuguqulwa Kwamaselula Ngama-Wallets Wedijithali | Martech Zone
Izinga lokuguqulwa kwamaselula limele iphesenti labantu abakhethe ukusebenzisa uhlelo lwakho lokusebenza lweselula / iwebhusayithi elungiselelwe iselula, ngaphandle kwenani eliphelele lalabo abanikezwe lokho. Le nombolo izokutshela muhle kanjani umkhankaso wakho weselula futhi, ngokunaka imininingwane, yini edinga ukuthuthukiswa.
Abaningi ngenye indlela e-commerce ephumelelayo abathengisi babona inzuzo yabo yehla uma kukhulunywa ngabasebenzisi beselula. Isilinganiso sokulahlwa kwenqola yokuthenga siphakeme ngokuhlekisa kumawebhusayithi weselula, futhi lokho kungukuthi uma unenhlanhla yokwenza abantu babheke ukunikezwa ukuqala.
Kepha kungenzeka kanjani lokhu, lapho inani labathengi abahambahambayo likhula ngamashumi ezigidi minyaka yonke?
Amadivayisi eselula avele kude nenhloso yawo yoqobo. Uma sithembekile, izingcingo nemibhalo akuyona into eyinhloko yamadivayisi we-smart iningi labantu. Umakhalekhukhwini usuyisandiso somuntu wesimanje futhi usebenza cishe zonke izinhloso ezinokuthenjelwa, kusukela konobhala ongaconsi phansi kuya enqoleni yokuthenga online.
Kungakho ukubona umakhalekhukhwini njengolunye uhlobo nje kungasenele. Izinhlelo zokusebenza, amasayithi nezindlela zokukhokha kufanele zilungiswe futhi zifakwe kabusha kulawa madivayisi kuphela. Enye yezindlela eziguqula kakhulu ukwenza ukuthengiselana kwamaselula ukuphathwa kwemali kwe-ewallet, okuyisihloko salesi sihloko.
Ukwenza ngcono Amanani Wokuguqulwa Kwamaselula
Okokuqala, ake sicacise into eyodwa. Ukuhweba ngamaselula kuyathatha izintambo umhlaba we-e-commerce ngokukhulu ukushesha. Eminyakeni emihlanu nje kuphela yabona irize ecishe ibe ngama-65%, manje ephethe ama-70% we-e-commerce isiyonke. Ukuthengwa kwamaselula kulapha ukuhlala futhi kuthatha imakethe.
Ngokumangazayo, ukushiywa kwenqola yokuthenga kusephakeme kakhulu kumawebhusayithi weselula kunokuqukethwe okufanayo okubukwe kumakhompyutha wedeskithophu. Le yinkinga enkulu kuwo wonke umuntu, ikakhulukazi abathengisi abancane kanye nezinkampani ezintsha ekushintsheni. Kungani lokhu kwenzeka?
Okokuqala, kukhona okusobala. Amawebhusayithi weselula avame ukusetshenziswa kabi, futhi ngesizathu esizwakalayo. Kunamadivayisi amaningi, osayizi, iziphequluli, kanye nezinhlelo zokusebenza ezenza iwebhusayithi ehloniphekile ephathekayo ephathekayo idinga inani elikhulu lezinsizakusebenza nesikhathi.
Ukusesha nokuzulazula kuwebhusayithi yeselula, ngamashumi noma ngamakhulu ezinto zokuthenga kuyakhathaza futhi kuyakhathaza. Noma ikhasimende linenkani ngokwanele ukwenza konke lokho bese liqhubeka nokuphuma, ababaningi abanemizwa yokungena ekubambekeni kwenqubo yokukhokha.
Kukhona isisombululo esihle kakhulu. Kungabiza kakhulu ekuqaleni, kepha nakanjani kuyakhokha ngokushesha okukhulu. Izinhlelo zokusebenza ziyisixazululo esingcono kakhulu samadivayisi eselula. Zenzelwe ngqo injongo yokusetshenziswa kweselula futhi zijabulisa kakhulu ukubukwa. Futhi, njengoba sikwazi ukubona, izinhlelo zokusebenza zeselula zinezinga lokushiya inqola yokuthenga eliphansi kakhulu kunawo womabili amawebhusayithi wedeskithophu neselula.
Abathengisi abashintshe besuka kumawebhusayithi weselula baya kuzinhlelo zokusebenza babone ukwanda okukhulu kwemali engenayo. Ukubukwa komkhiqizo kukhuphuke ngama-30%, izinto ezingezwe enqoleni yokuthenga zikhuphuke ngama-85% kanti ukuthenga okuphelele kukhuphuke ngama-25%. Kalula nje, amazinga wokuguqulwa angcono ngokusebenzisa izinhlelo zokusebenza zeselula.
Okwenza izinhlelo zokusebenza zikhange kakhulu kubasebenzisi yindlela enembile yokuzulazula, ngoba, phela, yenzelwe amadivayisi eselula. Inhlolovo evela ku-2018 ikhombise ukuthi amakhasimende amaningi ayakwazisa ukusebenziseka okusheshayo nejubane, kanye nethuba lokusebenzisa ukuthenga okukodwa ngama-e-wallets agciniwe kanye namakhadi wesikweletu.
Ubuhle bezikhwama zedijithali bukulula kwazo nokuphepha okwakhelwe ngaphakathi. Lapho okwenziwayo kwenziwa kusetshenziswa isikhwama semali esidijithali, ayikho idatha emayelana nomthengi edalulwayo. Okwenziwayo kubonwa ngenombolo yaso eyingqayizivele, ngakho-ke akekho umuntu oqhubeka nenqubo ongathola imininingwane yekhadi lesikweletu lomsebenzisi. Akugcinwa ngisho nasocingweni lomsebenzisi.
Isikhwama sedijithali sisebenza njengommeleli phakathi kwezimali zangempela nemakethe. Iningi lalezi zingxenyekazi linikeza indlela yokukhokha eku-inthanethi ebizwa ngokuthi ukuthenga ngokuchofoza okukodwa, okusho ukuthi asikho isidingo sokugcwalisa noma yimaphi amafomu nokunikeza noma yiluphi ulwazi - inqobo nje uma uhlelo lokusebenza lukuvumela ukukhokha i-e-wallet.
Ezinye izikhwama zedijithali ezaziwa kakhulu namuhla yilezi:
I-PayPal One Touch
Njengoba ukwazi ukubona, ezinye zazo ziqondene ngqo ne-OS (yize iningi lazo lizama ama-crossovers nokusebenzisana), kepha iningi labazimele izikhwama zedijithali ziyatholakala kuwo wonke amapulatifomu futhi ziguquguquka kakhulu. Banikela ukwesekwa kwamakhadi amaningi wesikweletu nawasebhange, kanye nezinkokhelo zamavawusha kanye nokuxhaswa kwe-cryptocurrency.
Noma ngabe uzokwakha uhlelo lokusebenza kusuka ekuqaleni ukuze luhambisane nezidingo zakho ezithile nezimfuno zobuhle, noma usebenzise ipulatifomu ye-e-commerce ekulungele, ukuhlanganiswa kwesikhwama sedijithali kuyadingeka. Uma usebenzisa ipulatifomu, iningi lomsebenzi onzima seluvele wenzelwe wena.
Ngokuya ngohlobo lwebhizinisi lakho nendawo, amapulatifomu e-commerce azokusiza ukuthi ukhethe ama-e-wallet amahle kakhulu eqenjini lakho elihlosiwe. Ukuphela kwento okufanele uyenze ukusebenzisa lezo zinkokhelo.
Uma ufuna ukwakha kusuka ekuqaleni, kungakuhle ukuthi uqale ngesethi ebanzi yezinketho ze-e-wallet bese ulandela amamethrikhi. Izikhwama ezithile zedijithali zingadingeka kakhulu kunezinye, futhi lokhu kuncike kakhulu endaweni okuyo, izimpahla ozithengisayo kanye neminyaka yamakhasimende akho.
Kuneziqondiso eziningana lapha.
Bakuphi amakhasimende akho? Isifunda ngasinye sinezintandokazi zaso, futhi udinga ukuba nengqondo kulokhu. Umthetho wengubo wokuthengisa emhlabeni wonke yi-PayPal. Kepha uma wazi ukuthi ingxenye enkulu yokuthengisa kwakho ivela eChina, kufanele ufake i-AliPay ne-WeChat. Amakhasimende omfelandawonye waseRussia akhetha iYandex. IYurophu inesisekelo esikhulu somsebenzisi seSkrill, MasterPass neVisa Checkout.
Imaphi amadivayisi athandwa kakhulu? Bheka amamethrikhi akho. Uma ingxenye enkulu yabathengi bakho isebenzisa i-iOS, kungaba ukuhlakanipha ukufaka i-ApplePay. USame uya nge-Android Pay kanye ne-Samsung Pay.
Yini iminyaka yobudala yamakhasimende akho? Uma usebenza kakhulu nabantu abasha, kufaka phakathi izikhwama zedijithali ezinjengeVenmo ngu-yebo onzima. Abantu abaningi abaseminyakeni yobudala engama-30-50 basebenza kude noma njengama-freelancers futhi bathembele kumasevisi afana ne-Skrill ne-Payoneer. Sonke siyazi ukuthi ama-Millenials akusilo iqembu elineziguli kakhulu, futhi ngokuqinisekile azokuyeka ukuthenga uma engaboni inketho yawo yokukhokha ayithandayo.
Iziphi izimpahla ozithengisayo? Ukuthengiswa okuhlukile kudonsela izingqondo ezihlukile. Uma ukugembula kuyi-turf yakho, iWebMoney namapulatifomu afanayo anikezela ngamavawusha kuyisinqumo esihle ngoba asevele edumile emphakathini. Uma uthengisa imidlalo nokuthengiswa kwedijithali, cabanga ngokusebenzisa ama-e-wallet asekela ama-cryptocurrensets.
Uma ungaqiniseki ukuthi uyaphi, khuluma namakhasimende akho. Wonke umuntu uyathanda ukucelwa umbono, futhi ungakwenza lokhu kuzuze wena ngokunikeza ucwaningo olufushane. Buza abathengi bakho ukuthi bangathanda ukukubona esitolo sakho. Ungasithuthukisa kanjani isipiliyoni sabo sokuthenga, nokuthi iziphi izindlela zokukhokha abazizwa bekhululeke kakhulu ngazo. Lokhu kuzokunikeza umkhombandlela omuhle wokuthuthuka okuzayo.
E-commerce iyatholakala kuwo wonke umuntu. Kwenze ukuthengisa izimpahla kuwo wonke umuntu yonke indawo kube lula kangako… Futhi kunzima kakhulu ngasikhathi sinye. Isayensi nezibalo zale makethe eshintsha njalo akulula ukuyifaka.
Isimo sengqondo somthengi ojwayelekile sishintshe kakhulu eminyakeni eyishumi edlule futhi kufanele wenze ngokufanele. Funda futhi uzivumelanise nezimo, ngoba ijubane lapho umhlaba wedijithali uthuthuka khona kucabanga.
Tags: amazon akhokheinkokhelo ye-androidisikhwama sedijithalie-commercethuthukisa amazinga wokuguqulwauhlelo lokusebenza lweselulaisicelo mobileumkhankaso weselulacommerce mobileamazinga wokuguqulwa kweselulaisabelo semakethe yeselulaumthengisi weselulaindawo yeselula nohlelo lokusebenza lweselulainani labathengi abahambahambayo kithiukuphuma kwe-visa